March 5, 2020 6311
विवा’ह गरेको चार वर्षसम्म महेश’प्रसाद र गीता अवस्थीले नको रहर त उनीहरुलाई पनि थियो । तर गीता काठमाडौं बसेर अंग्रेजीमा स्ना’तकोत्तर गर्दै थिइन् । महेश बैत’डीमा रेडियो सञ्चालन’मा व्यस्त थिए । त्यसैले उनीहरू’ले सन्तान जनमाए’नन् ।
यसबी’चमा समाज र आफन्तहरु उनीहरु’लाई प्रश्न गर्थे– बच्चा कहिले ?सन्ता नहरुको योजना थियो, गीताको एमए’को पढाइ सकिएप’छि मात्र सन्तान जन्माउने । ०७५ मा गीताको पढाइ पनि सकि’यो । उनको पेट’मा भ्रुण हुर्कन थाल्यो ।
सन्तान र श्रीमतीको स्याहा’रका लागि महेशले ३–४ लाख रुपैयाँ बैंकमा जम्मा पारिसके”का थिए । गीता’को पेटमा शिशुले लात्ति हान्न थालेपछि अवस्थी दम्पत्तिको खुशी दुई गुणा भयो । नियमित स्वास्थ्य जाँच गराइरहे, शिशुको अवस्था’बारे अस्पताल’ले कुनै खराब रिपो’र्ट दिएको थिएन ।
तर गीताले सन्तान’लाई संसार देखाउन आफ्नो पेट चिर्नु’पर्ने भयो । २४ असोज, २०७६ मा शल्यक्रि’यामार्फत गीता’ले छोरा जन्माइन् । ‘पाँच वर्षको प्रतिक्षा’पछि छोरा’लाई समाउँदा यति खुशी भएको थिएँ कि त्यसलाई शब्दमा वर्ण’न गर्न सक्दिनँ’, महेश सम्झि’एरै दंग पर्छन् ।
शिशु जन्मिएप”छि हस्पिट’लले भन्यो, ‘बच्चामा सोडिय’मको मात्रा थोरै कमी छ । एक दिन मेन्टेन गरे पुग्छ ।’चार दिनपछि ह्याम्स अस्पतालको बेडबाट निस्किएर शिशुसहित अवस्थी दम्पत्ति सुकेधारा’स्थित कोठामा पुगे । बैतडीबाट महेश’का आमा बा र आफन्त खुशी साट्न काठमाडौं आइपुगेका थिए । हर्षोल्लासमै न्वारान ग’रियो ।
छोराको नाम महेश’ले नै जुराए ‘शिवान्स अवस्थी’। शिवान्सले धर्ती टेकेको १३ दिन मात्र भएको थियो । रातको ११ बजेपछि अस्वाभा”विक रुपमा रु’न थाले । कात्तिक महिना । छोराला”ई चिसो पो लाग्यो कि ? उनीहरु छोरोलाई सेके, गीता’ले दुध चुसाइन्, न्यानो पारेर सुता’उन खोजिन् । अहँ ! शिवान्सको रुवा’इ रोकिएन ।
शिशुका लागि रुनु नै अभिव्यक्ति’को एक मात्र माध्यम हो । भोक लाग्दा पनि रोयो, रो’ग लाग्दा पनि, दुख्दा पनि रो’यो । किन रो’यो ? पहिल्याउन भने अविभावक’लाई महाभारत ।
अर्को दिन हेर्दा शिवान्स’को पेट भुक्क फुले’को थियो । एकावि’हानै महेश र गीताले छोरा’लाई कान्ति बाल अस्पता’ल पुर्‍याए । डाक्टरले आकस्मिक कक्षमा राखेर शिवान्सलाई औष’धी र सुइ दिए । दुई घण्टापछि अस्पताल’ले भन्यो, ‘बच्चाको अवस्था अलि जटि’ल भएकाले एनआईसी’यूमा राख्नुपर्छ । तर हामीकहाँ बेड खाली छैन ।’
छोराको रुवा’इ रोकि’एकै थिएन । बाबुआमा’लाई सक’स भयो । महेश’ले अनुनय गरे, ‘सरकारी अस्पताल भनेर विश्वा:स गरेर आएको, कृपया मिलाइ दिनु न ? यति सानो बच्चा बोके’र कहाँ–कहाँ धाउने ?’
अस्पताल’ले भन्यो, अहँ ! मिल्दै मिल्दैन । शिवान्स’लाई नजि”कैको त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइयो । धन्न अस्पतालले भर्ना लियो । एनआईसी”यूमा राखेर उप’चार थालियो । बाबुआमा’ले बल्ल लामो सास फेरे ।
तर फेरि बेचैनी शुरु भयो । शल्यक्रिया गरी सन्तान जन्माएकी गीताले छोराला’ई छातीमा सुताउने धो’का पूरा नहुँदै अस्पताल’को भुइँमा सुत्नु परेको थियो । डाक्टर त भन्दैथिए, ‘हामी हेर्दै छौँ, आत्तिनु पर्दैन ।’तर कसरी न’आत्तिनु ?
अस्पताल’को चिसो भुइँ । कक्ष’भरि मान्छे । रात परेपछि महेश र गीता ग्यालरी’मा कार्पेट ओच्छ्याए’र पल्टिन्थे । गीताको खुट्टा चिसो’ले सुन्नि’एर बडेमान भएको थियो । छोरालाई चुसा’उन नपाउँदा दुध गान्निएर अर्को पीडा थपिएको थियो ।
महेशको सक’स बढ्दै गयो । छो’राको चिन्ता’सँगै सुत्केरी पत्नी’लाई पनि सम्हाल्नु थियो । ‘गीताको अवस्था यस्तो भएको थियो कि केही पनि सम्झिन छाडि’सकेकी थिइन् । मात्र रोइ’रहन्थिन्’, महेश आँशु लुकाउँदै बोल्छन्, ‘म आफैं पनि सम्हालिन नसक्ने अवस्था’मा पुगेको थिएँ ।’
महेश दिनमै कैयौँ पटक डाक्टर’लाई सोध्न पुग्थे, ‘डाक्टर सा’ब के भएको हो मेरो बावुलाई ?’ डाक्टरले रेडिमे’ड उत्तर मात्र दिन्थे, ‘नर्मल छ । इन्भेस्टिगेसन गर्दैछौं । केही हुन्छ कि भनेर कोशि’स गरिरहे’का छौं । त्यस्तो केही भयो भने भन्छौं ।’
अस्पतालले शिवान्सला’ई कहिले एनआईसीयू त कहिले आईसी’यूमा राख्थ्यो । आमाला’ई दुध निचोरेर ल्याउन भनिएको थियो । विहान भयो कि गीता सीसीमा दुध बो’केर कक्ष’बाहिर कुर्थिन् ।
दुध फ्रिजमा राखेर नर्सले दैनिक पाँच एमएल पिलाइ’दिन्थे । तर शिशु’को हालत झन् खरा’ब भइ’सकेको थियो । अब पेट मात्र होइन, पुरै शरीर फुले’को थियो ।
यसरी २० दिन कटाएपछि महेश’को डाक्टरप्रति भरो’सा डग्म’गायो । उनले डाक्टरलाई भने, ‘तपाईहरु सक्नुहुन्न भने भन्नुस् । हामी अर्कै अस्पताल लैजान्छौं ।’ डाक्टरले जवा’फ दिए, ‘कोशिस गरिरहेका छौं । के भए’को हो ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सकिर’हेका छैनौं ।’…. (अनलाइ’न खबर केही अंश)
सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला…
Prev[अचम्मको घट’ना] पर्सामा बिहे गरेर ल्याएको बेहुलि’लाई एक युवकले मेरी गर्ल’फ्रेण्ड भन्दै बिच बाटो’मै छेकेपछी..
Nextटेकु अस्पताल’बाट भागे’र धरान पुगेका कोरोना’को आशंका भाएका युवा फेरि वी.पी अस्पताल’बाट पनि भागे
ब्रेकिङ न्यूज… संसद पुनर्स्थापना गराउने सर्वोच्चको फैसला